ဇနီးသည်ကို ကွာရှင်းပြီး ဇနီးသည်ရဲ့တူမနဲ့ လက်ထပ်လိုက်တဲ့ ဟော့ခ် | Mizzima Myanmar News and Insight /* TA: Added on nov-22-2019 */
ဇနီးသည်ကို ကွာရှင်းပြီး ဇနီးသည်ရဲ့တူမနဲ့ လက်ထပ်လိုက်တဲ့ ဟော့ခ်
တရုတ်စူပါလိဂ်ကလပ် ရှန်ဟိုင်း SIPG အသင်းမှာ ကစားနေတဲ့ ဘရာဇီးတိုက်စစ်မှှူး ဟော့ခ် ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ဇူလိုင်လမှာ ဇနီးဖြစ်သူ အီရန် အိန်ဂျလို နဲ့ ကွာရှင်းခဲ့သူပါ။ သူတို့ရဲ့ ချစ်သက်တမ်းက (၁၂)နှစ်တောင် ရှည်လျားခဲ့ပြီး ရင်သွေး(၃)ယောက် ရပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲ အခုလို လမ်းခွဲလိုက်ကြတာပါ။
အသက် (၃၃)နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ တိုက်စစ်မှူးကြီးအနေနဲ့ ဘာကြောင့်များ နှစ်ရှည်လများ တွဲလာခဲ့တဲ့ သံယောဇဉ်ကို အဆုံးသတ်လိုက်သလဲလို့ အားလုံးက သိချင်ခဲ့ကြတာပါ။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ဟော့ခ်တစ်ယောက် ဘာကြောင့်အခုလို လုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာကို အားလုံး သိသွားကြပါပြီ။ အဲဒါကတော့ ဟော့ခ်ရဲ့ ဇနီးသည်ဟောင်း အိန်ဂျလို ရဲ့ တူမဖြစ်သူ ကမီလာ ကြောင့့်ပါပဲ။
Hulk marries his niece Camila Angelo | selection of brazil | Chinese Super League Sports https://t.co/DT8n1NryQW pic.twitter.com/V4EUdyK5xB
— News Maker (@NewsMaker_News) March 23, 2020
ဟော့ခ်နဲ့ ဇနီးဟောင်းရဲ့တူမဖြစ်တဲ့ ကမီလာ အိန်ဂျလိုတို့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလ ကတည်းက လူသိရှင်ကြား တွဲခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ သတင်းတွေက ဖော်ပြနေကြပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့ သူတို့နှစ်ယောက်က တရုတ်မှာ လက်ထပ်လိုက်ကြပြီလို့ TheSun က ဖော်ပြပါတယ်။
ဟော့ခ် က သူ့ရဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်ထဲမှာ လက်ထပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း ရေးသားသွားခဲ့ပြီးနောက် သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ လက်ထပ်လက်စွပ်ကိုယ်စီဝတ်ထားတဲ့ပုံကိုလည်း ပရိသတ်တွေသိအောင် တင်သွားခဲ့ပါတယ်။
Shanghai SIPG forması giyen Hulk, 12 yıl evli kaldığı eski eşi Iran Angelo de Souza’nın yeğeni Camila ile evlendiğini açıkladı. pic.twitter.com/6VyJZJqsPA
— Buzz Spor (@buzzspor) March 24, 2020
အာဂျင်တီးနား သတင်းစာ တစ်စောင်ရဲ့ ဖော်ပြချက်မှာတော့ ကမီလာ ဟာ တရုတ်မှာနေထိုင်ဖို့အတွက် ဗီဇာ လိုအပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဟော့ခ်နဲ့အတူ အချိန်ပြည့်နေထိုင်လို့မရသေးပဲ ဘရာဇီးနိုင်ငံနဲ့ အသွားအပြန် ပြုလုပ်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ ပါရှိပါတယ်။
ဟော့ခ်ဟာ အစပိုင်းမှာ ဒီဖြစ်ရပ်ကို ဘယ်သူ့ကိုမှ အသိမပေးခဲ့ပေမယ့် ဒီနှစ်ထဲမှာပ သူ့ရဲ့မိဘတွေနဲ့ ကမီလာရဲ့အစ်ကို ဖြစ်သူတို့ကို အသိပေးခဲ့ပြီး သူတို့နှစ်ယောက် တကယ်ပဲ တွဲနေခဲ့ကြကြောင်း ဝန်ခံခဲ့တာပါ။
El futbolista que actualmente defiende al Shanghai SIPG de la liga china se casó con Camila Angelo.https://t.co/M9A5IWlQlt
— La Cuarta (@lacuarta) March 23, 2020
ပရိသတ်တွေကတော့ ဇနီးဖြစ်သူကို ကွာပြီး သူ့ရဲ့တူမ ကို လက်ထပ်ယူလိုက်တဲ့ ဟော့ခ် ကို အားကျနေကြသလို၊ တစ်ဖက်မှာလည်း ဝေဖန်သူတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။
#Notizie Incredibile Hulk, ha sposato la nipote più giovane della ex moglie: Lo scandalo di Natale, così era stata definita la relazione tra Hulk - attaccante brasiliano dello Shanghai -eCamila, nipote più giovane della moglie, Iran. Fu lo stesso… https://t.co/jq72kQgoFy pic.twitter.com/BInVBme1ga
— sportlive (@sportli26181512) March 23, 2020
လက်ရှိမှာတော့ ဟော့ခ်နဲ့ ကမီလာ တို့ဟာ တရုတ်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မခံရရေးအတွက် ကြိုးစားနေကြပြီး သူတို့ရဲ့ လက်ထပ်ပွဲကို ရောဂါအန္တရာယ်မရှိချိန်မှာမှ ကြီးကြီးမားမားလုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ သတင်းတွေက ဖော်ပြပါတယ်။